Guddoomiyaha Aqalka Sare oo cabasho ka dhan ah Farmaajo iyo Rooble u gudbiyay Qaramada Midoobay – AfmoNews
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo cabasho ka dhan ah Farmaajo iyo Rooble u gudbiyay Qaramada Midoobay
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qoraal ka kooban laba bog a u kala diray Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya ee James Swan ,qaar ka mid ah dalalka reer Yurub iyo Midowga Afrika.
Qoraalka ayuu Cabdi Xaashi waxa uu ku dalbaday inay soo fara-geliyaan arrimaha Doorashada dalka ka dhacaya 2020/2021.
Guddoomiye Xaashi ayaa Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ku eedeeyay inay ku tunteen shaciga u yaalla dalka, isla markaana ay nidaam sharci darro ah ku magacaabeen guddiyada Doorashooyinka Soomaaliya.
Cabdi Xaashi guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa hore uga soo horjeestay Guddiyada Doorashada heer Federaal iyo kuwa Doorashooyinka Xildhibaanada ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland ee uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Hoos ka Akhriso Qoraalka Dacwada ee uu gudbiyay Cabdi Xaashi.